Information for Myanmar about Islam: ဘာသာခြားများ မေးခွန်းများအတွက် အဖြေများ (၁၆)
(၁) တခုလောက်ထပ်မေးမယ်နော်..နမက် ဖတ်တဲ့ခါမှာ... မတ်မတ်ရပ်တယ်.. ကုန်းတယ်.. ၀တ်လိုက်တယ်. အဲ့လို သုံးခု ဘာလို့လုပ်တာလဲအကို-
မြန်မာပြည်မှာ ဖာရ်စီ စကားနဲ့ အလွယ်သုံး နမာ့ဇ် ဖတ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ တစ်ကယ်တော့ ဆွလာဟ် ဖြစ်ပါ တယ်။ အလွယ်အားဖြင့် လက်ရှိ နမာ့ဇ် ကို ၀တ်ပြုဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခြင်းလို့ နားလည်စေလိုပါတယ်။ ဘာသာ တိုင်းရဲ့ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုမှာ ရပ်လျှက်၊ ထိုင်လျှက်၊ လျှောင်းလျှက်၊ ဦးညွှတ်လျှက်၊ ဦးချလျှက် ၀တ်ပြု ဆုတောင်းဘို့ သွန်သင်ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း ထိုနည်းပါပဲ။ သာသနာရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တစ်ဦး စာအုပ်က ဘုရားရှိခိုး အမျိုးမျိုး မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။) အစ္စလာမ်က အဲ့ဒီ အချက်တွေ အားလုံးပါဝင်အောင် ရပ်လျှက်၊ ဦးညွှတ်လျှက်၊ ဦးချလျှက်၊ ထိုင်လျှက်- (နာမကျမ်းတဲ့အခါများမှာ လှဲလျှောင်း လျှက်) ၀တ်ပြုပါတယ်။ (ရပ်စဉ်၊ ထိုင်စဉ်၊ ဦးညွှတ်စဉ် ဘာတွေကို ရွတ်ဖတ်သလဲ မမေးတော့ မဖြေသေးဘူး နော်)
(၂) နမက် လုပ်ပြီးခါနီးမှာ ဘာလို့ ခေါင်းကို ဘယ်ကိုလှည့်လိုက် ညာကိုလှည့်လိုက်လုပ်တာလဲအကို
လက်ျာဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ သတ္တ၀ါ အပေါင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ သတ္တ၀ါအပေါင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေလို့ မေတ္တာပို့ပေးတာပါ။ (ရွတ်ဖတ်တဲ့ စာသား အတိုင်း ပြောလိုက်တာပါ။)
(၃) ဆွန်နီနဲ့ ရှီးယားဘာလို့ ကွဲရတာလဲအကို-
အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ လုရာက စတင်ကွဲပြားကြတာပါ။ အစ္စလာမ့်ဥပဒေနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှု ဧရိယာ ကျယ်ဝန်းလာပြီး လူဦးရေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့အခါ- အဲ့ဒီ လူထုနဲ့ နယ်မြေကို အုပ်ချုပ်စိုးမိုးလိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောထား ကွဲတာက စတာပဲ။ (internet စာမျက်နှာတွေမှာ ရှိပါတယ်။) အခြားဘာသာများလို အခြေခံ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှု ကွဲပြားရသည်ထိ မကွဲကြပါ။
(၄) ကိုရမ် ကျမ်းစာကို ပြန်လည်ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအကို .. တနည်းဆိုသော် ကိုရမ်အလင်းပြလို့ ခေါ်တာပေါ့နော်..
တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ ခေတ်တိုင်းနီးပါးမှာ ရှိတာ ဆိုတော့ မြောက်များစွာပါပဲ။ မူရင်းစာလုံးက တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တော့ ကွဲပြားမှု မရှိဘူး- ဦးတည်တဲ့ပရိတ်သပ်ပေါ် မူတည်ပြီး ရှင်းပြတဲ့ စကားလုံး (ရှင်းလင်း ချက်တွေကတော့ သူ့လူထုနဲ့ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့ပညာအလျှောက် မတူတာတွေ ရှိပါတယ်)
(၅) အကို အာရပီနဲ့ နမက်ကိုဖတ်တာလား.. ဥုရတူ ဘာသာနဲ့ဖတ်တာလားအကို-
ဆွလာ့ဟ် ဆောက်တည်တဲ့ အထဲမှာ ရပ်စဉ် ရှေ့ဆောင်က ကုရ်အံကို သင်ပေးတယ်။ (တစ်ပိုဒ်ချင်းပေါ့)။ ဒါကြောင့် မွတ်စလင်အားလုံးအတွက် ဘုံစကား အာရ်ဗီလို ရွတ်ပြတယ်။ ဦးညွတ်ဘို့ ဦးချဘို့ (တိုင်ပင်) ချိန်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း အာရ်ဗီလို တိုင်ပင်ပေးတယ်။ ဒီတော့ အားလုံးက အားလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံးက အာရ်ဗီလိုပဲ ရွတ်ဆိုရပါတယ်။ မိမိတစ်ဦးတည်း အသံတိတ် မေတ္တာပို့တဲ့ အခါမှာတော့ မိမိရဲ့ အားသန်ရာ မိခင်စကားနဲ့ မေတ္တာပို့ခွင့်ရှိပါတယ်။
(၆) အကိုဖတ်တဲ့ နမက်ကို အာရဗီလို မြန်မာစာလုံးပေါင်းလေးနဲ့ ရေးပြပါလားအကို-
ကုရ်အံ တစ်အုပ်လုံးကို ရေးပြရမှာ ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ညီလေး။ ညီလေး လေ့လာလိုရင် ကုရ်အံ တစ်အုပ်လုံးကို အသံနဲ့ ဖိုင်တွေ youtube တို့မှာ ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီမှာ နားထောင်ယူပါ။ အဲ့ဒီ တစ်အုပ်လုံးထဲက ကြိုက်တဲ့ အပိုဒ်တွေကို ဆွလာဟ်မှာ ရွတ်ဆိုတာပဲလေ။
(၇) ရမ်ဇမ် နှစ်ခုရှိပါတယ် ..ကုလားလိုတော့မရေးတော့ပါဘူး မြန်မာလိုသာရေးပြပါ့မယ်အကို.. မုန့်အိဇ် နဲ့ အသားအိဇ်ပေါ့နော်.. ဘာလို့ မုန့်အိဇ်နဲ့ အသားအိဇ်လို့ နှစ်မျိုးကွဲရတာလဲအကို
ရမ်ဇမ် နှစ်ခု မဟုတ်ဘူး ညီလေး။ ရာမ်ဿွန် (စာလုံးပေါင်း အသံထွက်အမှန်)က လ ရဲ့ အမည်ပါ။ လ ဆိုတာက ကောင်းကင်က လ မဟုတ်ဘူး။ တစ်နှစ်မှာ ၁၂ လ ရှိတဲ့ အထဲက လ တစ်လ ရဲ့ အမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရာမ်ဿွန်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ကျွမ်းလောင်ခြင်း၊ ကျွမ်းလောင်အောင် ခံစားစေခြင်းလို့ ဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း ရသကို ခံစားစေတဲ့ လ လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီလမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက ဥပုသ်သီလ စောင့်တည်တယ်။
ညီလေး ပြောလိုတာက အီးဒ် နှစ်မျိုး အကြောင်းပါ။ အီးဒ် ဆိုတာ ပွဲတော် (ပျော်ရွှင်ဘွယ် ကျင်းပသော ပွဲတော်) လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရ်ဗီစကားမှာ ပွဲတော်တိုင်းကို အီးဒ် လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ပွဲတော်ကိုလည်း အီးဒ်လို့ ခေါ်တာပဲ။ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကိုလည်း အီးဒ်လို့ ခေါ်တာပဲ။
ဒီမှာ ဘာပွဲတော်လည်း ဆိုတာက ရှေ့က ဆက်တဲ့ စကားလုံးပေါ် မူတည်ပါတယ်၊ ဥပမာ ခရစ်မတ်စ် ပွဲတော် ဆိုပါတော့- အီးဒူလ် မီလာ့ဒ် လို့ခေါ်တယ်။
မွတ်စလင်များကတော့ အီးဒ်ဒူလ် ဖီေဿလ် နဲ့ အီးဒူလ် အဿွာဟာ ဆိုတာကို ကျင်းပပါတယ်။ အီးဒူလ် ဖီေဿလ်က ၀ါကျွတ်ပွဲတော် ဖြစ်ပြီး၊ အီးဒူလ် အဿွာဟာက- ဟာ့ဂ်ျ အထိမ်းအမှတ် ပွဲတော် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟာ့ဂ်ျကို အောက်မှာ ကြည့်ပါ။)
(၈) အာလင်ဆိုတာ သိလားအကို
အေလင် ဆိုတာက ပညာ လို့ ဖြစ်တယ်။ အာ လင်မ် ဆိုတာက ပညာတတ် လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) အကိုက အာလင်လား အကိုက အာဝမ် လားအကို-
ဉာဏ်မပေါက်မြောက်သေးတဲ့ သူတိုင်းက အာလင်မ် လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အာဝမ် (ပညာ မတတ်သေးသူ)လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ အကိုက သမိုင်းပညာကို တတ်တယ် ဆိုပါတော့၊ သမိုင်း ပညာရှင် အဆင့်ထိ တတ်တယ် ဆိုပါတော့- အကိုဟာ သမိုင်းပညာမှာ အာလင်မ် ဖြစ်နေပေမယ့်- အခြားတစ်ဘက်- နိုင်ငံရေးပညာ၊ သိပ္ပံပညာ၊ ပထ၀ီပညာ- စတာတွေမှာ ပညတ်မတတ်သေးသူ (အာဝမ်) ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) ဥပုသ်စောင့်ဖူးလားအကို၊ အကိုက အာလင်လဲ မဟုတ်၊ အာဝမ်လည်း မဟုတ်၊ ဘာကြောင့် ဥပုသ်စောင့် တဲ့ခါမှာ အစာကို မစားဘဲနေရတာလဲ.. ရေကိုမသောက်ပဲနေရတာလဲ အကို
ဘာသာရေးကို တတ်အားသမျှ လိုက်နာခြင်းဟာ အဲ့ဒီ ဘာသာကို ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။ ငါက ဘုန်းကြီးမှ မဟုတ်ဘဲ အရက်သောက်လို့ ရတာပေါ့- ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေမျိုးက ဘာသာ သာသနာတွင်းမှာ မသင့်တော်တဲ့ ဆင်ခြေမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ ဥပုသ်သီလ စောင့်တည်မှုမှာ အစာရေစာ ရှောင်ကြည်ခြင်း ရှိနေပါတယ်။ (၀ိနည်း မတူလို့ လုံးဝ တစ်ထပ်တည်း မတူပေမယ့်- အစာမစားပဲ နေတာခြင်းတော့ တူပါတယ်။) ဒီမှာ ဆာလောင်မှု ရသ၊ ဆာလောင်လာလို့ ဆာလောင်မှုကိုသည်းခံရတဲ့ ရသ၊ အစာရေစာ ငတ်မွတ်နေသူတို့ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်များကို ခံစားရမှာပါ။ ဒါတွေ အားလုံးက ရသတွေချည်းပါပဲ။ ဒါတွေကို ခံစားတတ်စေလို လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို မေးကြည့်ပါ- ဥပုသ်စောင့်ရင် ဘာဖြစ်လို့ အစာမစားဘဲ ရှောင်နေရတာလဲ လို့ ညီလေး ရလာတဲ့ အဖြေကို ပြန်ပေးပါ။ အကို ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
(၁၁) အကို အီမန် ဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲအကို
အီမာန် ဆိုတာ ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂) ဒါနဲ့ ဟာခ်ျ လုပ်တာ.. ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲအကို.. ဘာကြောင့် လူတွေမက်ကာမှာ သွားပြီး ဟာခ်ျ လုပ်ကြတာပါလဲအကို-
ဟာ့ဂ်ျ လုပ်တာက ကံဆောင်ပရိဝါ့သ် ပြုတာပါ။ မက္ကာဟ်မှာ သွားရောက်ပြီး ကံဆောင်ပရိဝါ့သ် ပြုတာက မက္ကာဟ်ရှိ ကာအ်ဘာ ၀တ်ကျောင်းတော်ကို ကံဆောင်ပရိဝ့ါသ်ပြုဘို့ နေရာ အဖြစ် ဘုံ သတ်မှတ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) ဟာဂ်ျ လုပ်တာနဲ့ ရဟန်းဝတ်တာလို့ ဘယ်လို အချက်ကြောင့် ခိုင်းနှိုင်းနိုင်တာလဲ အကို
ကံဆောင် ပရိဝါ့သ် ပြုစဉ်မှာ (၁) ဆံပါယ်ရတယ် (၂) အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ရတယ် (၃) မေထုံမှုမှ ရှေုာင်ရတယ်၊ (၄) ဖရုသ၀ါစာ ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ရတယ် (၅) ရန်လိုမုန်းထားမှုများ အားလုံးကို ဖယ်ဖျက် ပစ်ရတယ်။ (၆) ၀တ်ကြောင့်စွန့်ရတယ်။- ဒါတွေကြောင့်ပါ။
(၁၄) အကို့ကို အသက်ဘယ်လောက်မှာ မွတ်စလင် ဘာသာအဖြစ်သွတ်သွင်း ခဲ့တာလဲ အကို.. မွတ်စလင်ဘာသာရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်အရွယ်မှာ ဘာသာကိုသွတ်သွင်းရပါသလဲအကို ..
ဒီမေးခွန်းလေးက သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ လူတွေဟာ ကိုယ်တွေ့ကို ခံစားတတ်လေ့ ရှိတော့ ညီလေးက အခု ယုံကြည်နေတဲ့ ဘာသာထဲကို သွတ်သွင်းခံလိုက်ရတာလား။ တစ်မျိုး မထင်နဲ့နော်-၊ အကိုကတော့ သွတ်သွင်းခံ ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုး တစ်ခါတစ်ရံမှ မကြုံဘူးခဲ့ဘူး။ အစ္စလာမ် သာသနာမှာ သူများကို သွတ်သွင်းခွင့် မရှိဘူး။ မေးလာသူကို ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်။ ဒါတောင် ရန်ကို ရှောင်ရတယ်။ အစ္စလာမ် သာသနာကို လေ့လာရင်း နှစ်သက် လာသူက အစ္စလာမ် အဖြစ် ခံယူခွင့်ရှိတယ်။ ဒါဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွတ်လပ်ခွင့်ထဲမှာ ရှိနေတာပါ။
(၁၅) Islam ၇ဲ့ ဆိုလိုရင်းက ဘာလဲအကို
အစ္စလာမ် ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က (ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်တယ်။) အဲ့ဒီ စကားလုံးက မွတ်စ်လင်မ် လို့ ဆင့်ပွားပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ဆောင်ရွက်သူ လို့ဖြစ်တယ်။
(၁၆) အကို တနေ့ကို နမက် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖတ်ပါသလဲအကို.. မွတ်စလင် နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကိုရမ် အပြင်ကို ရှရီရက် ဥပဒေနဲ့ပါ အုပ်ချုပ်ပါတယ်အကို. ဒီတော့ အကို ရှရီယက် ဥပဒေဆိုတာကို သိပါသလားအကို။ ရှရီရက် ဥပဒေကို ဓမ္မလို့ပြောမလား အဓမ္မလို့ ပြောမလားအကို-
ဆွလာ့ဟ် ရုပ်ပြလေ့ကျင့်မှုကို တစ်နေ့မှာ ငါးကြိမ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘက်ထရီတစ်ခုကို အားဖြည့်သလိုပါပဲ။ ပြီးရင် ဆွလာဟ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်တိုင် ရွတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ လူ့စည်းကမ်းသွန်သင်မှု (ကုရ်အံစာသားနဲ့)အတူ အပြင် လောကမှာ တစ်နေ့လုံး ကျင့်ဆောင်စေတယ်။ ဒါကြောင့် ဆွလာဟ်ကို တစ်ကယ့် နားလည်သူများက တစ်နေ့ လုံး ဆွလာဟ်ထဲမှာ ရှိနေပြီး တစ်ကယ် နားမလည်သူကတော့ ဘက်ထရီ ဖြည့်ထားလျှက် မသုံးပဲ ထားတဲ့ လျှပ်စစ်မီး သဘောပါပဲ။
ရှရီအာ့တ် ဆိုတာက အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ဥပဒေ၊ ပညတ်၊ ၀ိနည်း လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဥပဒေ ဆိုတာရှိ တော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှရီအာ့တ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တာပါ။ ဥပဒေကို အသုံးချတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီ မူတည်ပြီး ဓမ္မ- အဓမ္မ ဆိုတာ ခံစားလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၇) တခနမူနာလေးကိုပြပါ့မယ်အရက်သောက်ရင် ရှရီယက် ဥပဒေအရ.. ဘာလုပ်ရမလဲ အကို သူများ ပစ္စည်းခိုးရင် ရှရီယက် ဥပဒေအရ.. ဘာလုပ်ရပါသလဲအကို သူများ သားမယားနဲ့ ဖောက်ပြားရင်..ရှရီယက် ဥပဒေအရ ဘာလုပ်ရပါသလဲ။ ကျူးလွန်းသူရဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရခြင်းပဲလို့ အကိုက ဆိုခဲ့ရင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ပေးဆပ်ရတာမဟုတ်ဘဲ တောင်းယူသွားတယ်လို့ ဆိုချင်တယ် အကို။ ပြန်ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရပ်မှာ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ပေးတာ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကော- အရက်သောက်ရင် ဘာလုပ်သလဲ၊ ခိုးရင် ဘာလုပ်သလဲ၊ သူများမယားကို ကြာခိုရင် ဘာသလုပ်သလဲ ဆိုတာတွေကို ပြန်လေ့လာစေလိုတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကို လေ့လာစေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီက ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများကို အဲ့ဒီ နိုင်ငံက လူတွေ လိုက်နာရမှာပါ။ မလိုက်နာရင် ဘယ်လို အပြစ်ပေးမယ် ဆိုတာကိုလည်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပြဌာန်းပြီး ရှိပါတယ်။ မလိုက်နာရင် အဲ့ဒီ ဥပဒေ အတိုင်း ခံရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ- နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖေါက်ရင်၊ သို့မဟုတ် လူသတ်ဓါးပြ အလောင်းဖျောက်ရင် သေဒဏ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်တို့မှာ ဘာလုပ်လုပ် အများဆုံးသော ပြစ်ဒဏ်ဟာ ထောင် ၁၅ နှစ်မျှသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ နိုင်ငံတွေက သေဒဏ်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းဘို့ မကြာခဏ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်က သေဒဏ်စနစ် ဖျက်သိမ်းပေးမှုကို လက်မခံပါ။ အမေရိကန်မှာလည်း ပြစ်မှု ဒီကရီအရ သေဒဏ်မိန့်ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကို ခွဲခြား နားလည်နိုင်အောင် အရင်အဦး လေ့လာစေလိုပါတယ်။
အခု မွတ်စလင်တိုင်းပြည်ပေါ့နော်..ပြန်ကြည့်ပါ..အဲ့လို ပြန်ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရပ်နဲ့ ညီမညီကို အကို youtube မှာ ရှာကြည့်စေချင်ပါတယ် အကို သူတို့ မျက်နှာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို တကယ်ပြန် ပေးဆပ်သူတွေ ..ပြန်ပေးဆပ်နေရတာတွေ ဟုတ်လားဆိုတာကိုပါ အကို
Youtube အပါအ၀င် media တိုင်းမှာ ဘက်ပေါင်းစုံ အမြင်ပေါင်းစုံက တင်ထားတာပါ။ ဘာသာတစ်ခု ကို ချီးမွမ်းတာများ တင်ထားသလို ပုတ်ခတ်တာများလည်း အများကြီးပါ။ မြန်မာဘုန်းကြီးများ သင်္ကန်းကြီးနဲ့ မိန်းမနဲ့ ကာမဆက်ဆံနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလားတူ ခရစ်ယာန်များကို ပုတ်ခတ်ထားတာတွေလည်း အများကြီးပါ။
လူသတ်ပွဲများ ဆိုရင်လည်း ကရင်နဲ့ ဗမာသတ်ပွဲ၊ ဗမာတွေက ရှမ်းမတွေကို မဒိန်းကျင့်မှု များစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေကို ဆွေးနွေးလိုရင် ညီလေးအနေနဲ့ မီဒီယာ ပညာ သို့မဟုတ် မီဒီယာ သင်တန်းတစ်ခုကို အရင် အဦးကျေညက်အောင် လေ့လာစေလိုတယ်။
ကျနော်အကို့ကို အများကြီး မမေးသေးပါဘူးအကို.. အငြင်းပွားနိုင်မဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှောင်ပြီးတော့ မေးလိုက်တာပါအကို..
ညီလေးဘက်က ရိုးသားရင် ကြိုက်တာကို မေးလို့ ရပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းကို မေးလို့ရပါတယ်။
အများပြောနေတဲ့ ဂျီဟတ်တို့ အကြောင်းတွေ ကျနော်မဆွေးနွေးပါဘူးဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်က အကိုရဲ့ ယုံကြည်မှု့အတိုင်းအတာနဲ့ အကို့ရဲ့ခံယူချက်ကလေးကို သိရုံမျှလောက်ကိုသာ မေးမြန်းလိုက်တဲ့သဘောပါနော်..
တစ်ကယ် ဆွေးနွေးလိုရင် မေးလို့ရပါတယ်။ အကို့ ယုံကြည်မှုကို သိလိုလို့ မေးတယ် ဆိုတော့ ညီလေး ယုံကြည်မှုကိုရော မေးမြန်းခွင့် ရှိမလား-။ မေးမြန်းနိုင်တယ် ဆွေးနွေးနိုင်တယ် ဆိုရင် ညီလေးယုံကြည်တဲံဘာသာကို ဘာကြောင့် ယုံကြည်သလဲ- ညီလေး ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားက ပြောတဲ့ ကျမ်းစာအတိုင်း တစ်ကယ် ယုံကြည်ပါသလား-- ဆိုတာလေး ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။
Posted by A Muslim at 4:43 AM
ဗုဒ္ဓကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ပက်သက်လို့ ကာလာမorကေသမုတ္တိမှာ ဘယ်သူမှမပြောတာတွေပြောတယ် ဥပမာကျမ်းစာမယုံဖို့ သူ့ကိုလဲမယုံဖို့ပေါ့ ယုံတာထက်သိတာကိုအလေးထားတယ်ပေါ့ သူ့သာသနာလဲပျောက်သွားမှာပါ ငါကတယ်တော့freethinkerပါ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင် ယေဟောဝါorအလ္လာရဲ့ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲမှာဖန်ဆင်းချက်ကိုကြိုက်တယ်
ကမ်ဘာဦး မှာဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းပြီးနောက်မှာ ဂျူးဘာသာ(အိသရေလလူမျိုး)ကနေ ခရစ်ယန်ဘာသာ နဲ့ အစ်စလမ်ဘာသာ ဟူပြီးကွဲသွားတယ် ဒါငြင်းမရတဲ့သမိုင်းပဲ ဒါကြောင် ယေဟောဝါနဲ့အလ်လလ်ဟာ အမည်ကွဲသာဖြစ်တယ် မှတ်ထားညီလေး ကို ကတော့ ကာလာမသုတ်တံ တစ်ခုပဲ
ပဋိပုစ္ဆာဗျာကရနည်းကလဲ ကိုယ်ခံရလို့ သူများဆွဲထည့်တဲ့ သဘောယုတ်လေးပဲ ဒီလိုကလေးမဆန်ပါနဲ့လေ။ ဓမ္မဓိဌာန် နဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဌာန် မင်းနဲနဲ နားလည်သားပဲ ကြိုစားပါဦး စကားကြီးဆယ်မျိုးအသုံးချနည်း နဲ့ ကိုဘက်ပါအောင်စည်းရုံးနည်း ထပ်သင်လိုက်ပါဦး။ ရဲနိုင်ကလဲ ဘာတွေလျှောက်မေးနေတာလဲ မင်းသူ့ကိုအထင်ကြီးနေတာပဲ အစ္စလမ်ကျောင်းသွားတက် ဝါဒီတိုင်းဟာဝါဒကို ကိုယ်စားမပြုဘူးကွဲ့ ညီငယ်ရဲ့ သူကဆန္ဒသိတ်များပြီးဗဟုသုတနည်းပါး တဲ့ လူသားပဲ ဒါပေမဲ့ သူမှန်တယ်ထင်တာအရမ်းပြောတာ အစ်ကိုနဲ့ တော်တော်တူခဲ့ တယ်
Cho Htoo Maung August 29, 2015 at 7:14 AM